असार ७ गते आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण, कुन प्रदेशबाट कतिखेर देखिन्छ सूर्यग्रहण ? Nepalpatra असार ७ गते आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण, कुन प्रदेशबाट कतिखेर देखिन्छ सूर्यग्रहण ?
काठमाडौँ, ७ असार । आज असार ७ गते आइतबार आषाढ कृष्ण औँसीका दिन खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान १०ः५० बजे स्पर्श गर्ने छ । मध्याह्न १२ः३८ बजे मध्य र अपराह्न २ः२३ बजे ग्रहणले मोक्ष प्राप्त गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तीन घण्टा ३३ मिनेटसम्म नेपालबाट ग्रहण देखिने उहाँले बताउनुभयो ।